Sharuudaha Isticmaalka – CORENav
Guddiga Samatabixinta Caalamiga (IRC) waxay illaalisaa Webseetkaan (https://corenav.org) si markaas laguu siiyo warbixinta ku saabsan shaqadeena iyo si ay ugu suurtogaliso dhaxgalkeena onleenka. Gelitaanka iyo isticmaalka webseetka IRC, ee ku xirayo webseetka IRC sidoo kale sida ka dajisashada qoraalada iyo tusmada IRC waxay quseysaa xeerarka hoose iyo sharuudaha lagu dajiyay Sharuudaha Isticmaalka. Haddii aadan ogolaanin Sharuudaha Isticmaalka ee gabi ahaanteeda, laga yaabo inaadan gelin ama isticmaalin webseetka IRC, ciwaanka webseetka IRC, ama ka dajisid qoraalo walboo IRC ama tusmada webseetka IRC. Fadlan ogow in IRC ay leedahay xaquuqda lagu badelayo ama lagu hagaajinayo Sharuudahaan Isticmaalka oo xili walba oo sabab walba iyo iyada oo aan ogeysiin jirin. Waxaad qiratay oo ogolaatay inaad masuul ka tahay ku haynta nafsadaada la hubiyay ee isbadelo noocaas ah. ISTICMAALKAAGA WEBSAYKA IRC WUXUU KA KOOBANYAHAY HESHIISKAAGA EE SHARUUDAHA LAGU DAJIYAY SHARUUDAHAAN ISTICMAALKA IYO SHARUUDA KALOO KALE EE LAGA YAABO IN LAGU TILMAAMO MEEL KALE EE WEBSEETKA IRC.
DHISMAHA CAQLIGA AH IYO MILKIILANIMADA AASTAANTA GANACSIGA
Waxaad qiratay oo aad ogolaatay in IRC ay tahay milkiilaha kaliya ee magaca IRC, loogada, iyo aastaanta ganacsiga kale ee diiwaangashan ee IRC iyo aastaamaha adeega (“Aastaamaha IRC”) sidoo kale sida qoraalada IRC iyo tusmada laga helay webseetka IRC.
Adiga oo ku xirayo webseetka IRC ama ka dajisanayo qoraalka IRC iyo tusmada, waxaad ogholaatay in lagaa helo xeerarka iyo sharuudaha lagu dajiyay hoostaan:
Waad fahamsantahay laga yaabo inaadan isticmaalin loogada IRC (bidixda) sida ciwaanka, laakin waxaad ku xiri kartaa IRC adiga oo isticmaalayo mid ka mid ah boorarka IRC ansixiyeen iyo ciwaanada lagu siiyay waxay matalaan u hogaansanaanta buuxdo ee la jiro xeerarka iyo sharuudaha iyo Sharuudaha Isticmaalka. Gaar ahaan, waad qirsantahay in laga yaabo inaadan isticmaalin loogada IRC ee webseetkeyga banaanka ah ama boggaga warbaahinta bulshada sida Facebook ama YouTube.
Aad qirsantahay oo aad ogolaatay inaad isticmaali kartid kaliya boorarka ay IRC ansixiyeen iyo ciwaanada iyo/ama qoraalada IRC ama tusmada oo ujeedooyinka waxbarashada.
Aad qirsantahay aadna ogolaatay in isticmaalkaaga ee boorar walba ee IRC ansixiyay iyo ciwaanada iyo/ama qoraalada IRC ama tusmada la xiriirto Aastaamaha IRC laga yaabo inaan lagu darin qeybaha sawir kale; ama lagama yaabo in lagu bedelo qaab walba oo ay ku jiraan cabirka, saamiyada, cabirka, naqshada, diyaarinta, midibada ama qeybaha; ama laga yaabo in la sawiro, naqshadeeyay ama haddii kale lagu jiido aragtida ama muuqaalka.
Aad qirsantahay oo aad ogolaatay inaadan ka faa’ideysan qoraalada IRC ama tusmada iyo/ama boorarka IRC ansixisay iyo ciwaanada.
Aad ogolaatid inaadan isticmaaleyn qoraalada IRC iyo tusmada iyo/ama boorarka iyo ciwaanada IRC oo ujeedooyinka ku xadgudbaa sharciyada gobol walba, wadanka ama sharciga maxkamada, oo ay ku jiraan xadeyn la’aan oo dhammaan sharciyada la xiriiro xaquuqda daabacaada iyo aastaanta ganacsiga.
Aad qirsantahay oo aad ogolaatay inaadan si qalad ah u matalin xiriirkaaga ee IRC.
Isticmaalkaaga qoraalka IRC iyo tusmada iyo/ama ee boorarka IRC ay ansixiyay iyo ciwaanada laga yaabo inaysan tilmaamin ama aasaasin aragtida in IRC ayidaan, ansixiyaan, kafaalaqaadayaasha ama ay xulufo layihiin badeecadaada, alaabaha, adeegyada ama webseetka.
Isticmaalkaaga qoraalka IRC iyo tusmada iyo/ama ee boorarka IRC ay ansixiyay ama ciwaanada laga yaabo inaysan tilmaamin ama aasaasin aragtida in IRC ka faa’ideyso iibinta alaab walba ama adeeg.
Isticmaalkaaga qoraalka iyo tusmada IRC iyo/ama boorarka IRC ansixisay ama ciwaanada laga yaabo inaan lagu isticmaalin qaab walba ee jahwareer ah, marin habaabinayo, ama qiyaanayo bulshada, ama ka hor istaagayo danaha ugu wanaagsan ee IRC.
Aad qirsantahay oo aad ogolaatay inaad ka mamnuucantahay isticmaalida qoraalka iyo tusmada IRC iyo/ama boorarka IRC ay ansixiyay ama ciwaanada oo qaab walba ee IRC ay ku hesho, iqtiyaarkeeda kaliya, ee la diidi karo ama taas oo ku jirto fuxshiga, dulqaad la’aanta rabshada, dhadhan la’aanta, dhaleeceynta ama galmo ahaan tusmada ama qoraalada ku janjeero. Gaar ahaan, boorarka IRC ansixisay iyo ciwaanada laga yaabo inaysan ka muuqan boggag walba ee Webseet walba ee ay ku jiraan tusmada ama xayeysiinta cabitaanada qamriga, tubaakada, sawirada qaawan, qoraal diimeedka, qoraalada dhexdhaxaadka, qoraalada siyaasada ama hubka.
IRC way ka laaban kartaa xaquuqdaada lagu isticmaalayo qoraalada iyo tusmada IRC iyo/ama boorarka IRC iyo ciwaanada oo waqti walba ee leh sabab ama sabab la’aan ah. Xiliga helida ogeysiinta joojinta, waa inaad isla markiiba joojisaa isticmal walba ama dhammaan isticmaalka qoraalada IRC iyo tusmada iyo/ama boorarka IRC ansixisay iyo ciwaanada. IRC waxay leedahay xaquuqda lagu raadinayo tallaabada sharciga ku haboon ee lagu joojinayo isticmaalo walba ee qoraalada IRC iyo tusmada iyo/ama boorarka IRC iyo ciwaanada ee dhacdada in IRC go’aansato in isticmaalkaaga aysan waafaqsaneyn xeerarka iyo sharuudo walba ee Sharuudahaan Isticmaalka ama sida lagu sheegay meel kale ee Webseetka; jabinada xaquuqda hanti walboo aqoonyahanka ama xaquuqda kale ee IRC ama xisbiga sadexaad, si xun u saameysay sawirka IRC, sumcada ama adeegyada ama barnaamijyada, ku xadgudbay sharci walboo quseeyo, xeerarka ama qaynuunka, iyo/ama waa howsha la mamnuucay.
DOOQA SHARCIGA; SHARCIGA MAXKAMADA
Sharuudahaan Isticmaalka waa inay maamushaa oo ay ku turjumantahay sida waafaqsan sharciyada Gobolka New York, iyada oo aan jirin siinta saameynta qilaafka qodobada sharciga ee gobolkaaga dhabta ah ama wadanka daganaanshaha. Sheegashooyin walba, dacwada sharciga ama dacwada maxkamada ee la xiriirto halkaas waa in la hor keenaa kaliya Gobolka New York, Gobolka New York, oo aad ogolaatid sharciga maxkamada ee maxkamdaha noocaas ah.
Fadlan ka taxadar in xadgudubka xaquuqda koobiga IRC, aastaanta ganacsiga, ama xaquuqda hantida aqoonyahanka kale waxay kugu sababi kartaa ciqaabaha rayidka iyo dambiga.
Waad ogolaatay illaalada oo aad waxyeelo la’aan ku haysid IRC oo waxyeelo walba ee ka timid qaladkaaga iyo/ama isticmaalka qaldan ee webseetka IRC, qoraalada iyo tusmada IRC, iyo/ama boorarka IRC ay ansixisay iyo ciwaanada.
IRC AYAA SAMEYSO DAMAANADAHA, MATALAADAHA AMA BAYAANADA, MUUJISAA AMA SOO JIDAASAA, OO SIDA WAAAFAQSAN QORAALADA IYO RUSMOOYINKA EE WEBSEETKEEDA KU JIRO, OO AY KU JIRAAN AASTAAMAHEEDA, IYO HALKAAN DIIDMOOYINKA DHAMMAAN DAMAANADAHA EE LAGA YAABO HADDII KALE IN LAGU SOO JEEDIYO SHARCI AHAAN. ISTICMAALKA QORAALADA IYO TUSMADA IRC IYO/AMA BOORARKA IRC ANSIXIYEEN IYO CIWAANADA KALIYA WAA HALISTAADA GAARKA KUU AH.
Tusmooyinka webseetka waxaa lagu hormariyay sida waafaqsan heshiiska ee Xafiiska Dadka, Qaxootiyada iyo Socdaalka, Waaxda Mareykanka ee Gobolka, laakin si muhiim ah uma matasho xeerka hay’adaas oo waa inaysan qiyaasin qirashada ee Dowlada Faderaalka.